General Abu Suleym”Qorshooyin dagaal Cusub oo aan kusoo kordhinay fagaaraha dagaalka, Cadowga Allaah haku bishaareysto maalmo mad madow” | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
General Abu Suleym”Qorshooyin dagaal Cusub oo aan kusoo kordhinay fagaaraha dagaalka, Cadowga Allaah haku bishaareysto maalmo mad madow”	Seteembar 23, 2008
Abaanduulaha ciidamada mujaahidinta Al-Shabaab General Abu Suleym ayaa daboolka ka qaaday taaktikooyin cusub oo aan hore loo arag isla markaana ay Mujaahidiinta Shabaab kusoo biiriyeen fagaaraha dagaalka ee Somaliya.
Qorshooyinkaasi ayuu sheegay General Abu Suleym in ay isugu jiraan hab dagaallan Cusub iyo howlgallo fariid ah oo ay fulinayaan Bi Idnillaah Mujaahidinta Al-Shabaab,iyadoona howlgalladaasi lagu dhameystiri doono cadowga soo duulay iyo cawaantiisa maalmaha kooban ay u hareen.
Hogaamiyaha Mujaahidinta Al-Shabaab General Abu Suleym wuxuu wacad ku maray in ay wajiga dagaalka Muqdisho wax badan ka badali doonaan dhawaanahan isla markaana ay ku qasbi doonaan cadowga Tigreega in ay ka cararaan magaalada Allaah idankiisa maahan awoodeena ayuu sii raaciyay.
General Abu Suleym (Allaha dhowree) waxaa uu ugu bishaareeyay dhamaan Muslimiinta Somaliyeed gaar ahaan Mujaahidiinta wax badan oo ay ku farxaan,halka cadowga Allaah uu ku wargaliyay in ay sii qotaan qubuurahooda,kuna bishaareystaan maalmo mad madow oo kusoo wajahan Allaah Idankiisa.
Hogaamiye Abuu Sulaym wuxuu cadeeyay halka ay hogaamiyeyaasheenu iyagoo safka hore dagaalka kaga jira si geesinimo leh ay aduunka uga tagayaan in iyagoo dulleysan ay dhankooda bakhtin doonaan hogaanada Ridadu.
Gantaalkii sababay shahaadada Macalin Aadan Ceyrow iyo walaalihiisii kale yeysan cidna ka shakin in aysan u barooran doonin marka hore gaalka hogaaminaya Saliibiyiinta ee Mareykanka iyo cawaanta wakiilada kaga ah mandiqaddan Geeska Afrika.